Ugu Weyn Ee Celery
Isticmaalka iyo isticmaalka celery, faa'iidooyinka iyo waxyeellada
Maanta, cunto la'aan, oo leh dhif iyo naadir, waxay dhameeyeen aan lahayn celery. Khudradda cagaaran waxay leedahay qadar badan oo nafaqo ah oo caadi u ah jirka iyo caawinta daaweynta tiro cuduro ah. Aynu aragnay xajmiga uu ku fiican yahay iyo sida ugu fiican ee loogu isticmaalo cuntadaada. Halabuurka kiimikada ee celceliska Halabuurka khudradda ee lagu daro borotiinka, dufanka iyo carbohydrateska waxaa ku jira xaddi badan oo fitamiino, macdan iyo fibre.
Sida loo keydiyo celery xilliga jiilaalka, fitamiinada goosashada guriga
Celery waa warshad biennial ah ee dallad. Waxaa badanaa loo isticmaalaa diyaarinta noocyo kala duwan oo suxuun leh: koowaad, labaad, macmacaanka. Celery waxaa lagu kori karaa dhulkiina, sida dhirtu u caanbaxdo cimilada, dhaxan. Marka goosashada for kaydinta Celery waa la goostay dayrta goor dambe, waxay si fudud u dulqaadanayo dhaxan, si aad u qaadan karto waqti ay beeri.
Goobidda iyo daryeelka ee celery ee beerta
Kobcinta caleemaha xididku maaha hawl adag, laakiin waxay u baahan tahay fiiro gaar ah. Ka dib oo dhan, waxaa aad u fiican in lagu raaxaysto saladh nafaqo leh jiilaalka leh khudradda xidid ku koray beerta. Qaar ka mid ah ayaa ka cabsada waqti dheer sida cawska oo kale, qofna ma doonayo in uu siiyo waqtigeeda.
Waa maxay faa'iido leh iyo sida loo cuno asaasiga celery
Celery waxay ku faantaa meel ka mid ah khudradda ugu caansan. Xitaa wakhtiyadii hore waxaa loo isticmaalay sida qayb ka mid ah daroogooyinka. Waqtigeena, khudradda asaasiga ah waxaa loo yaqaan kaliya ma ah sida daawo dhaqameed, laakiin sidoo kale qayb ka mid ah dhadhan fiican leh oo faa'iido leh cuntada maalin kasta. Root Celery Cucubyada Root waa giig u ah qabow-u-adkaysiga leh oo ka tirsan qoyska dalladda.
Faa'iidooyinka celery ee ragga
Beerta cagaarka ee caanka ah ee caanka ah (caleen, asliga ah iyo xididka) ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray oo keliya dhadhanka iyo hagaajinta dhadhanka suxuunta, laakiin sidoo kale daaweynta dadweynaha iyo daawada dhaqameed, taas oo ah macnaheedu yahay in lagu wanaajiyo waxqabadka galmada ee ragga. Maqaalka ayaa ku sheegi doona sifooyinka bogsashada iyo sida loo isticmaalo khudradan cajiibka ah.
Ma loo baahan yahay in dhirta loo nadiifiyo ka hor inta aan la isticmaalin?
Inkasta oo caleemaha qajiyadu ay ka soo jeedaan badda Mediterranean, dhaqanka ayaa si qarsoodi ah u heley caan ku ah gobollo badan oo waqooyiga ah, oo ay ku jiraan Ruushka iyo Ukraine. Waxaa la og yahay in dhammaan qaybaha dhirta ay ku habboon yihiin cunista - laga bilaabo asalka si ay afkoda iyo cagaarka, laakiin qof kasta ma garanayo sida loo nadiifiyo celery iyo haddii ay lagama maarmaan tahay in la sameeyo.
Noocyada beerista ee celery iyo daryeel isaga oo ku jira berrin bannaan
Dadku waxay ka mahad celinayaan carafka iyo dhadhanka tayada ee celery aan waqti dheer ka horaynin: warshadkan waxaa loo adeegsaday karinta dhowr qarniyo, inkastoo ay tixraac u tahay taariikhda taariikhda hore ee Giriigta; taariikhda hore, waxaa lagu qiimeeyay oo keliya daawo ahaan. Maalmahan, taageerayaal badan oo nafaqo leh oo nafaqo leh ayaa ku hawlan qashinka koraya ee goobo gaar ah.
Noocyada isticmaalka celery ee leh xanuunka 'pancreatitis'
Shaki la'aan, khudradda iyo miraha waxay ku jiraan tiro badan oo nafaqo ah oo jirka u baahan. Samaynta cuntada, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo xaaladda caafimaadka, sababtoo ah, inkastoo tayada vitamin-ka ee hodanka leh, alaabooyin badan ayaa ka horjoogsanaya cudurrada qaarkood. Waxyaabaha kiimikada ah iyo walxaha kalooriga ah ee badeecadda Cun labadaba caleemaha xididka iyo qaybta cagaaran ee celery, kuwaas oo ka kooban: fitamiino: A, B1, B2, B3, B5, B6, C, E, K; macro-iyo mareeymo: boron, calcium, chlorine, birta, magnesium, manganese, fosfooraska, potassium, selenium, sulfur, zinc.
Noocyada beerista iyo daryeelka ee celery asalka ah ee dhulka furan
Celery xididdo waxaa loola jeedaa dhirta leh xilli dheer oo soo kordhaysa. Muuqaalkani wuxuu inta badan ka hortagayaa Foosha xumaha, laakiin marka la eego maaha mid adag in la koro beer celinta dacha iyadoo bixisa waxqabadyada beeraha qaarkood. On gaarka ah ee beerashada, iyo sidoo kale xeerarka aasaasiga ah ee daryeelka xanaanada, akhriyo hoos.
Waa maxay isku darka daaweynta ee liinta, malab iyo celery
Daawo dhaqameedku waxay ogyihiin tiro badan oo ah noocyada kala duwan ee daawooyinka dabiiciga ah ee u nugul jirka. Waxay awood u leeyihiin inay si dhib leh u saameeyaan aagga dhibaatada iyaga oo aan keenin wax falcelin ah ama waxyeello kale oo xun. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan-ka-dib-u-qiimeeya oo qiimo leh caafimaadka waa isku dar ah liin, malab iyo celery.
Noocyada beerista rooteryada rootiga laga bilaabo abuurka guriga
Cagaarka celery-macaan ee kareemka ah waa khudradda la rabo beerta. Si ay u koraan khudaar miro leh oo dalagga ah, waa inaad doorataa kala duwanaanta ugu fiican oo aad raacdo talooyinka hoos ku qoran. Calaamadaha dhirta iyo noocyada kala duwan Cagaarka waxaa iska leh dhaqanka labadii sano ee dalladda. Tilmaamaha dabeecadda waa sida soo socota: dhererka baadiyaha ilaa 1 m oo leh rosette caleen weyn; caleemaha waa la kala saari karaa, cagaar dhalaalaya, oo leh caraf udgoon; dalagga xididka ayaa la aasaasay sanadka ugu horeeya; tuubada wareegsan ama mashiinka-qaabeeya; midabka tuberka waa cawl ama beeg-cad, saxarada ayaa ah caddaan ama kareem; Blooms iyo siinayaa abuur marka dib loo beerto.
Faa'iidooyinka iyo waxyeellada celery ee jirka bani'aadamka
Celery waa mid ka mid ah dalagyada beerta ugu caansan. Sidoo kale waa hanti qaali ah oo ka mid ah fitamiinada iyo walxaha raadraaca. Macluumaad kala duwan oo ku saabsan dhirta, faa'iidooyinkeeda iyo isticmaalka ayaa lagu nidaamiyaa maqaalkeenna. Tilmaamaha Botanical waa celin hal ama laba sano jir ah oo ka tirsan qoysaska dalladda.
Qaababka isticmaalka celery ee loogu talagalay turjumaanka
Sababtoo ah taajirnaanta nafaqooyinka celery waa mid waxtar leh oo waxtar leh iyo qaybta ugu weyn ee daawooyinka gout. Aqoonsi faahfaahsan oo leh sifooyinka aan caadiga ahayn, halabuurka iyo hababka isticmaalka ayaa kaa caawin doona daaweynta iyo ka hortagga cudurkan. Waa maxay boogtu? Waa xanuun ku dhaca xubnaha, oo ay keentay xanuunada endocrine.
Tilmaamaha loo isticmaalo celery ee caafimaadka dumarka
Iyadoo bilawga guga ku yaal dukaammada dukaamada waxay bilaabaan inay muuqdaan khudrado cagaaran oo la yiraahdo celery. Qarniyo badan, sheygan u gaar ah ayaa loo tixgeliyey inaanu ahayn oo keliya dukaamo qiimo leh oo fiitamiin iyo macdan, laakiin sidoo kale waa gargaar aan loo baahnayn oo lagula dagaallamayo cuduro badan oo khatar ah. Maqaalkani waxa uu soo jeedinayaa in uu barto noocyada kala duwan ee celery, sifooyinka faa'iido leh, iyo sidoo kale hababka isticmaalka iyo khilaafaadka.
Celery waxaa jecel dad badan, warshadani waxay ka farxin kartaa cagaarka jilicsan iyo karootada, iyo dalagga dalagga ku filan oo nafaqo leh. Si kastaba ha ahaatee, dad yar ayaa ka ogaanaya sifooyinka bogsashada ee casiirka geedka this. Waxay ku yeelan kartaa saameyn xoog leh oo jidhka ka mid ah, iyo sidoo kale in lagu ilaaliyo caafimaad badan ee cudurada. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa faa'iidooyinka muhiimka ah iyo waxyeelada casiirka celery ee caafimaadka, iyo sidoo kale si sharaxaad u faahfaahin inta aad awoodi karto maalin kasta iyo sida si habboon loo cabbo cabitaanka bogsiinta.
Muujinta adeegsiga celceliska miisaan lumis
Celery waa khudradda oo ah mid gaar ah oo ka kooban maaddooyinka nafaqooyinka, dhammaan qaybahaas oo ah - khudaarta cagaaran, asliga ah iyo cagaarka - waxaa wada baabba'ay nin. Marka laga soo tago qiimaha nafaqada iyo faa'iidooyinka caafimaad, khudradda xididka leh waxay leedahay hanti qaali ah - isticmaalka joogtada ah wuxuu caawiyaa in lumiyo miisaanka. Halabuurka iyo kaloori-celinta qudaarta waxaa ku jira xaddiyo badan oo kala duwan oo fitamiino iyo macaadin, marka lagu daro, waxaa ku jira saliidaha lagama maarmaanka ah, nadiifinta, carotenoids, qadka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Celery 2019